के दोस्रो बच्चाको तयारीमा छन धुर्मुस सुन्तली यो लकडाउनमा ? (भिडियो हेर्नुस) – Classic Khabar
June 2, 2021 399
के दोस्रो बच्चाको तयारीमा छन् धुर्मुस सुन्तली ? सुन्तलीको गर्भवती अवस्थाको भिडियो धुर्मुस सुन्तलीले आफ्नै च्यानलबाट अपलोड गरेका छन् । भिडियो हेर्न उनीहरुले रमाइलोको लागि मात्रै अपलोड गरेको बुझन सकिन्छ । भिडियो लाखौँ दर्शकले हरिसकेका छन् । ****यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लि,क गर्नुहोस ****
यो पनि: विद्यार्थीको वार्षिक नतिजा तयार गर्दै विद्यालयहरु, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विद्यालयहरु बन्द भएपछि यसअघि लिइएका परीक्षा र आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट वार्षिक नतिजा प्रकाशन गरिने भएको छ । बाल कक्षादेखि कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको नतिजा यही जेठ मसान्तभित्र गर्न लागिएको हो ।
जिल्लामा ३२३ सामुदायिक र २१६ संस्थागत विद्यालय छन् । ती विद्यालयमध्ये सामुदायिकमा ७७ हजार ३३९ र संस्थागतमा ५७ हजार ४६३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नतिजा प्रकाशनसँगै आगामी असार १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनेछ । हेर्नुहोस् भिडियो